Baro Ciise, Kaniisada Adduunka ee Switzerland (WKG)
Muddo ka badan hal ilo ayaa diiradda saarey sidii aan u raadin lahaa oo ku ogaan lahaa Ciise injiilka. Badanaa, sida adiga oo kale, waan aqriyey oo waxaan xitaa aadi jiray fasal kulleej la yiraahdo Harmony of the Inspels. Laakiin in yar ayaan diirada saaray buugaag kale - badiyaa waraaqaha Bawlos. Waxay si la yaab leh ugu haboonaadeen inay qof ka kaxeeyaan sharciga iyo nimco.
Sidii lagu bilaabi lahaa Sannadka Cusub, wadaadkayagu wuxuu soo jeediyay inaan akhrino Injiilka Yooxanaa. Markii aan bilaabay inaan aqriyo, waxaan mar labaad la dhacay dhacdooyinka nolosha Ciise sida uu qoray John. Kadib waxaan sameeyay liis gareey hadalada Ciise ee ku saabsan cida uu yahay iyo wuxuu ka yimid 18 cutub ee ugu horeeya. Liistada ayaa ka koray sidii aan filaayay.
Kadibna waxaan dalbaday buug aan doonayey inaan wax akhriyo - In yar i Sii Ciise oo ay ii siisay Anne Graham Lotz. Waxaa soo saaray Injiilka Yooxanaa. In kasta oo aan qayb ka mid ah akhriyay, haddana waxaan horay u soo maray xoogaa aragti ah.
Mid ka mid ah barnaamijyada cibaadada maalinlaha ah, qoraagu wuxuu ku xusay dhowr jeer in daraasadaha Injiillada ay tahay hab wanaagsan oo "lagu sii wado jacaylka nolosha Masiixa," (John Fischer, Ujeedada Gaadhiga Nolosha ee Maalinlaha ah ee Shaqada).
Waxaad moodaa qof inuu isku dayayo inuu wax iiga sheego!
Markuu Filibos ka codsaday Ciise inuu tuso aabaha (Yooxanaa 14,8), wuxuu xertiisii ​​ku yidhi: "Kii i arka wuxuu arkaa aabbaha!" (V. 9). Isagu waa suuradda Ilaah ee soo dejiya oo ka tarjumaya ammaanta. Markaa haddaan si gaar ah Ciise ku baranno 2000 ama sano ka dib, markaa waxaan sidoo kale baranaa Aabbaha, Abuuraha iyo Bixiyaha nolosha iyo caalamka.
Waa wax maskaxdeena ka sarreeya inaan u maleynno inaan xadidan nahay, dadka dhimanaya ee laga abuuray ciidda dhulka waxay yeelan karaan xiriir dhow, xiriir shaqsiyadeed oo aan la koobi karin, Ilaaha Qaadirka ah oo aan baranno isaga. Laakiin waan awoodnaa. Caawinta Injiillada, waxaan dhegeysan karnaa wada sheekeysikiisa oo aan u kuur gelin karnaa sida uu ula dhaqmayo dadka liita iyo kuwa gobta ah, Yuhuudda iyo kuwa aan Yuhuudda ahayn, iyo sidoo kale dambiilayaasha iyo ragga is-xaqdaran, haweenka iyo carruurta. Waxaan aragnaa aadanaha Ciise - shucuurtiisa, fikirkiisa iyo dareenkiisa. Waxaan aragnaa naxariistiisa markuu la macaamilo carruurta yaryar, kuwuu barakeeyo oo baro. Waxaan ku aragnaa cadhadiisa ku saabsan lacagta beddaleysa iyo nacaybka uu u qabo munaafaqnimada Farrisiinta.
Injiillada waxay ina tusayaan labada dhinac ee Ciise - sida Ilaah iyo sida nin. Waxay na tusayaan annaga oo ah dhallaanka iyo dadka waaweyn, wiilka iyo walaalkiis, macallinka iyo dawada, dhibbanaha nool iyo guusha guuleysatay
Ha ka baqin inaad barto Ciise, oo ha ka shakiyin inay runti macquul tahay. Kaliya aqri injiillada oo aad jacayl ku dhacdo nolosha Masiixa.